Madaxweynaha DGPL Cadde Muuse iyo Saraakiisha dhinaca amniga oo tagey Tukaraq...
ciidama iyo gaadiid ka soo goostay s/land oo soogalay DGP.
bashiir Omar Ali/puntland
Ciidamo iyo gaadiid dagaal oo ka soo goostey maamulka Somaliland ayaa ku soo biirey ciidamada Dawlad Goboleedka Puntland ee difaaca kaga jira Gobolka Sool.
Ciidamadan ka soo goostey maamulka Somaliland oo ka soo jeeda Gobolka Sool ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen ciidamo si gaar ah u taabacsanaa Axmed Cabdi Xaabsade oo horey u ahaa wasiirka arimaha gudaha ee Dawlad Goboleedka Puntland haatanse siyaasadiisu u janjneerto dhanka Somaliland .
Masuul ka tirsan xarunta Madaxtooyada Dawlad Goboleedka Puntland ee magaalada Garoowe ayaa u xaqiijiyey warbaahinta caalamiga ah in sadexdan baabuur iyo ciidanka saaran ay haatan ku sugan yihiin xerada 54 ee ciidamada Daraawiishta Dawlad Goboleedka Puntland iyagoo halkaasi lagu siiyey dareyska ciidamada Puntland, isla markaana lagu dhafayo ciidamada Puntland ee ku sugan jiida difaaca ee duleedka magaalada Laascaanood.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo ka soo goostey maamulka Somaliland ay ku sii biiraan ciidamada Dawlad Goboleedka Puntland, waxaase xiliyo kala duwan jirey in ciidamo ka soo baxsadey Somaliland ku soo biiraan dhanka Puntland kuwaasi oo sheega inta badan inay ka xumaadeen duuleedka maamulka Hargeysa uu ku doonayo in uu ku qabsado deegaanada Puntland gaar ahaan Gobolka Sool magaalo madaxdiisa Laascaanood.
Madaxweynaha dowlad gobaleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa tagey deegaanka Tukaraq oo ay degan yihiin ciidanka dowlad gobaleedka Soomaaliyeed ee Puntland ,wuxuuna la kulmay masuuliyiin kala duwan.
Madaxweynaha Puntland Cadde Muuse ayaa bilaabey la kulmida dadkii ka soo barakacay Magaalada Laascaanood ,waxaana ku waheliyey socdaalkiisa Wasiiro iyo Taliyaal ciidan ayagoo booqday dhamaanba goobaha y joogaan Daraawiishta Puntland.
Madaxweynaha DGPL Cadde Muuse ayaa markii uu ka ambabaxayay Magaalada Garoowe ,wuxuu la kulmay Madaxda Xukuumada qaar ka mid ah ,gaar ahaan gudiyadii uu magacaabay oo uu kala hadlay arimaha ka jira Puntland.
Madaxweynaha ayaan 48 saac ee lasoo dhaafay ku jirey Kulamo kala duwan oo uu ku doonaya in kaga dhaadhiciya masuuliyiintaasi ,sidii wax looga qaban lahaa xaalada gobalka Sool.
Magaalada Garoowe oo dhan ayaa noqotey meel Milateri ayna ka socdaan Siyaasado iyo dadaalo dhinaca diblumaasiyadaa,inkastoo wararku sheegayaan in diyaargarowga Puntland yahay mid maalmihii ugu danbeeyey siweyn looga dareemayay Puntland oo dhan.
Madaxda Puntland ugu sareysa ayaa dhawaan waxa ay canaan kulul kala kulmeen Mudanayaasha baarlamaanka Puntland ,markii ay hortageen furitaankii Kalfadhiga 19-aad.
Baarlamaanka ayaa dhawaan waqti uqabtey Xukuumada uu hogaamiyo Madaxweyne Cadde Muuse ,ujeedkuna yahay soo celinta gobalka Sool.
Waqtiga baarlamaanka Puntland ayaa hada ay tagtey 14 maalmood in ka badan ,mana jiraan ilaa hada wax howlgal ah oo ay qaaday Xukuumada Puntland.
Booqashooyinka Madaxweynaha Puntland ee Tukaraq ayaa noqotey mid iska caadi ah ,isagoo mar walba la kulmo Masuuliyiinta kala duwan.